အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ရွှေလက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ပရိတ်သတ်အားအသိပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်စင်သီယာ – Maythadin
May Thadin | December 3, 2021 | Cele News | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ စင်ဒီယာကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် စင်ဒီယာကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲ လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
စင်ဒီယာကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့က တရာရုံးမှာ ထိပ်မြှားလက်ထပ်မော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြီတော့
ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ဟုတ်ကဲ့ ယူလိုက်ပါပြီ” လို့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူမျှဝေဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Congratulations ပါ စင်စင်ရေ…. ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ရာသက်ပန်ရိုးမြေကျပေါင်းဖက်နိုင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ မင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း စင်ဒီယာတို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် မင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတွေ တာင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္သူေလးနဲ႕ေ႐ႊလက္တြဲလိုက္ၿပီဆိုတဲ့ မဂၤလာသတင္းကို ပရိတ္သတ္အားအသိေပးလိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္စင္သီယာ
ပရိသတ္ႀကီးေရ စင္ဒီယာကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႕ ဗီဒီယို ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ စင္ဒီယာကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ခ်စ္သူနဲ႕ ေ႐ႊလက္တြဲ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန မွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။
စင္ဒီယာကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ခ်စ္သူနဲ႕ မေန႕က ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႕က တရာ႐ုံးမွာ ထိပ္ျမႇားလက္ထပ္ေမာ္ကြန္းတင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနၿပီေတာ့
ခ်စ္သူေလးနဲ႕ ေ႐ႊလက္တြဲလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို “ဟုတ္ကဲ့ ယူလိုက္ပါၿပီ” လို႔ မဂၤလာလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြနဲ႕အတူမွ်ေဝေဖာ္ျပထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
Congratulations ပါ စင္စင္ေရ…. ခ်စ္ရတဲ့ ခင္ပြန္းနဲ႕ ရာသက္ပန္ရိုးေျမက်ေပါင္းဖက္နိုင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြလည္း ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစလို႔ မဂၤလာဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ပရိသတ္ႀကီးေတြလည္း စင္ဒီယာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ မဂၤလာဆုမြန္ေကာင္းေတြ တာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် (၁၈)နှစ်ပြည့်မှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာမှာ မိသားစုနဲ့ အတူရှိနေခွင့်ရလို့ အရာရာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်..
လူရွှင်တော် ဦးမန်းဝင်းရဲ့ သမီး “ဟာသသရုပ်ဆောင် ဟေမာမန်းဝင်း ဆေးကုမှု ခံယူနေရ”
ခုချိန်ထိရည်စားမရှိတဲ့သူတွေ ထိုင်ငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားလောက်အောင် ချစ်သူလေးနဲ့သာယာနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်လိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်